माधव काम्रेड–एमाले कि कांग्रेस कि माओवादी ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, साउन १७, २०७८ मा प्रकाशित
देखिस् झुम्री ! हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले कस्तो मोहोनी लगाए माधव नेपाललाई । राष्ट्रनायक भनेको राष्ट्रनायक नै हो । एमालेलाई समाप्त पार्ने ‘भिलेन’ को रोल माधव काम्रेडले कति राम्रो गरी पुरा गरे ! अब अहिले सरकारमा नजाने भनेर माधव नेपालले ओलीले गर्ने कार्वाही पनि रोकी दिए । अदालत दाइना भएपछि कसको के लाग्छ ?
हो ! प्रचण्डको कारणले माधव नेपालको राजनीति समाप्त भयो । हुन त राधाकृष्ण मैनालीले २०६० साल असार ३० गतेको प्रकाश साप्ताहिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा नै ‘खजान्चीले एमालेलाई सिद्धायो !’ भनेका र’छन् । एमाले त होइन माधव नै सिद्धिए । अनि २०६१ साल भदौ ८ गते दृष्टि साप्ताहिकमा छापिएको अन्तर्वार्तामा उनै मैनालीले ‘एमाले माधवसँगै खाल्डोमा जाकिन्छ’ भनेका रान । एमाले माधवसंगै सिद्धिएन ।
नचाहिएको कुरो नगर ! मैनालीले कहाँ त्यस्तो भनेको छ ? कुरो बनाएर फतुर लगाउँछे । कहाँ छ ? प्रमाण देखाउन सक्छेस् !
किन नसक्नु । ‘मेरो चिन्तन र वास्तविकता’ भन्ने मैनालीको यो कितावमा ‘वार्ता खण्ड’ भन्ने एउटा भाग छ । हो यसमै छ । त्यति मात्र होइन २०६० साल फागुन ११ गते जनभावना साप्ताहिकमा दिएको अन्तर्वार्ताको ‘हेडलाइन’ नै ‘माधव नेपाल प्रजातन्त्रकै कलङ्क’ भनेर मैनालीले स्पष्ट पारेका छन् । हेर यहाँ संकलन गरेका मैनालीका लेख र अन्तर्वाता ! पढ्नु छैन, फतुर लगाई भन्छौ ।
मैनालीले भनेर हुन्छ ! जबसम्म हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले आरोप लगाउदैनन् तबसम्म माधव काम्रेड ठिक । जब महान राष्ट्रनायक प्रचण्डले माधव माथि आरोपको वर्षा गर्न थाल्छन् तब मात्र माधव ‘खलनायक, धोकेबाज, होली वाइन, राष्ट्रघाती, प्रतिगमनकारी’ ठहरिन्छन् ।
नमस्कार है काका–काकी! सण्डे र म पनि टुप्लुक्क आई पुग्यौ । काका–काकीको के विषमया छलफल हुँदैथियो कुन्नि । हामी चैं चिया पसलबाट सोझै यता आयौ ।
लौ केटा हो मुढा तानेर बस् । अनि चिया पसलका गफाष्टकहरु नेपाली नेता र राजनीति बारेमा के गफ गर्छन् । हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडको मुल्याङ्कन कसरी गर्छन । अनि माधव नेपालको बारेमा के भन्छन् ?
काका ! नेपालमा अधिकांशले प्रचण्डलाई जे भन्छन् त्यहाँ पनि माओवादी बाहेक सबैले त्यही भने । माधवलाई आफ्नो राजनीति आफैं समाप्त पार्ने व्यक्तिको संज्ञा दिए । राजनीति चै अब मन्त्रीमण्डल विस्तार भएपछि थाहा हुन्छ भन्दै थिए । उनार्को तर्क थियो उपेन्द्र यादवसंग भएका सांसद र माधवसंग भएका सांसदहरु मन्त्री नपाएपछि अन्तै चर्न जान्छन् । हाम्रो देउवा दाइको बारेमा चैं ‘देउवा भाग्यमानी’ हुन्, यिनीसंग योजना, सपना, क्षमता र जाँगर केही छैन भने ।
त्यो मुलाहर्ले भनेर हुन्छ ? हाम्रो महान सर्वहारावादी नेता, उच्च छलाङका जन्मदाता, जनताका हितैषी, योजनाका खानी, खुङ्खार चिन्तन राख्ने विश्वका सर्वमान्य कम्युनिष्ट प्रचण्ड काम्रेडको साथ पाएपछि देउवा त के उभिण्डेको झारिखण्डे पनि सफल हुन्छ ।
खै हौ काका ! सण्डेले पनि यस्तो भन्यो भनौला, मलाई पनि मनमा भाको कुरा भनौं भनौं लागेको छ । तिम्रो पार्टीका महान त्यागी नेताहरुले प्रचण्डलाई तनाव दिएर पागल नै बनाई राखेका छन् अरे । माओवादीका सबै सांसदले मन्त्री बनाइदे भनेर खुमालटारमा जात्रा गरे भनेर प्रचण्डले नै अस्ति भने । खै के, खै के, पो भाको जस्तो छ ।
हौ भाइ ! सबै पार्टीमा त्यही हो । माओवादी र माधवसंग भएका एकादुई सांसद छाडेर अरुको राजीतिक भविष्य समाप्त हुँदैछ । यो अन्तिम हो भन्ने बुझेकाहरुले मन्त्री बन्न दवाव दिने स्वभाविकै हो । जुन पार्टीमा सिद्धान्त, नीति, पद्धति, विचार र जनवादी केन्द्रीयता हुँदैन त्यहाँ पद र पैसालाई नै सर्वश्व ठानिन्छ, पहिलो र एकमात्र रणनीति भने पनि कार्यनीति भनेपनि लुटी खानु बन्छ । अब राजनीतिमा प्रचण्ड र माधवको अन्तिम खेलो–फड्को हो। यो बुझेका सांसदहरु मन्त्री बन्न मरीहत्ते गरेर प्रचण्डलाई दवाव दिदै छन् । उनलाई बडो ‘टेन्सन’ छ । उनी तनावमा छन् ।
वाइयात कुरो नगर भिरघरे ! हाम्रो माओवादी पार्टीका मन्त्री बन्न प्रतिवद्ध काम्रेडहरु त्याग र बलिदानका प्रतिमूर्ति हुन । हाम्रो काम्रेड प्रचण्डलाई अहिले केही तनाव भए पनि ३३ वर्ष पार्टीको प्रमुख भएर पार्टी हाँकेको अनुभव छ । त्यही अनुभवले आज मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न काम दिन्छ ।
हौ बुढा, ठीक भन्यौ, प्रचण्ड धेरै त्यागी छन् अरे ! प्रचण्डले मलमुत्र त दिनै पिच्छे त्यग गर्छन् भनेर ख्यातिनै फैलिएको छ । वाफरेवाफ, कस्ता महान त्यागी । अर्को कुरा, ३३ वर्षसम्म प्रचण्डले पार्टीमा हालीमुहाली समालेर त्यहाँ विचार, सिद्धान्त र पद्धति सबैको त्याग गरेका छन् । अनि त्यस्ता त्यागी पार्टीमा मन्त्री बन्ने त्याग गर्न कार्यकर्ता तम्तयार हुनु कुन ठुलो कुरा भो र । अब पनि पद नखोजे सुकेको, खिएको, मक्किएको, सक्किएको पार्टीको आस गरेर बस्छन् त सांसद !
कस्तो जरखरिएको कुरो गर्छे झुम्री ! हाम्रो राष्ट्रनायक महान काम्रेड प्रचण्डले बलिन्द्र धारा आँशु झारेर अनुरोध गरेपछि सबै सांसद संगसंगै रुदै ‘हामीलाई मन्त्री चाहिँदैन’ भन्न थाल्छन् । नाटक गर्न सक्ने खुवी हाम्रो प्रचण्डसंग छ ।
अहिले चैं काकाले ठिक भने है । वास्तवमा प्रचण्ड यस्तो नाटक गर्न चाहिँ सक्छन् । नाटक र चटक गर्न चैं माहिर छन् । तथाकथित ‘महान जनयुद्ध’ राष्ट्रलाई ५० वर्ष पाताल भसाउने नाटक, बाबुरामले भने जस्तो २० अरब झ्वाम पार्ने चटक, लडाकुको १२ अरब चिरिप्प पार्ने खेल…!
कस्तो खसालेर तर्क गर्छ । आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैछ । माधव नेपालको झुण्ड के गर्छ । उनले त झन २२ जनालाई नै मन्त्री बाउनु पर्ने होला !
काका ! माधव काम्रेडको बारेमा केही भन्नै पर्दैन । उनलाई फसाद छ । प्रचण्ड नाच्ने गीतको वोल छ– ‘लालुपाते नुइयो भुईतिर, कि लाउ मायाँ मैतिर, कि लाउ उहीतिर’ माधवको मायाँ कता हो अहिलेसम्म थाहा छैन । यिनी न भाले न पोथी । लिङ्ग नछुट्टिएको अवस्थामा छटपटाई रहेका छन् ।
लौ काका–काकी हामी लाग्छौं अब रुवावासी डाँडातिर।